Nwa nwoke na-ere ahịa na-ere ahịa QL-1518 onye na-emepụta ihe na onye na-ebubata ya nke ọma Qundeli
Akpụkpọ ụkwụ nwoke
Onye na -amị amị
Akpụkpọ ụkwụ Ogige
Akpụkpọ ụkwụ Ikikere
Akpụkpọ ụkwụ arụ ọrụ
ụmụaka na-agbachi katuunu QL-981-2 mara mma
ụmụaka na-agbachi QL-981 smart katuunu pearly-luster
nwoke ịhịa aka n'ahụ slipper QL-1397 dị mma
nwoke ejiji ejiji QL-1518 streamline
oge gboo nwoke slipper QL-1618 stripe stripe
onye na-asa ahụ na-amị amị QL-1235 mmiri anaghị egbochi
aha nameslipper: Onye na -amị amị
ihe NO .: QL-1518
outsole ihe: Eva
ihe elu: Eva
mbipụta logo: omenala
ụdị: casua, n'èzí, osimiri, oge gboo
aha ngwaahịa onye na -amị amị oge okpomọkụ, mmiri, ọdịda
ihe NO. QL-1518 okike nwoke
ihe outsole Eva ụdị okirikiri osimiri osimiri dịpụrụ adịpụ
midsole ihe Eva atụmatụ Ejiji, nkecha, Ibu arọ, iku ume, ihicha ngwa ngwa
ntụsara ahụ ， dị nro ， na-abụghị skid ， slip-on
ihe elu Eva
ihe mkpuchi Eva ụkpụrụ omenala
mbipụta logo omenala ngwugwu omenala
ebe orignal Fujian, China OEM/ODM nhọrọ
Omuma na inogide
Ihe mmịfe a na -eji ihe dị elu nke nwere ike hụ na akpụkpọ ụkwụ enweghị isi na ịdịgide adịgide.
Fechaa na nchedo
Slippers ndị a dị mma, dị nro, dị fechaa, na -adigide, dị mfe nhicha yana ngwa ngwa ihicha.
Ihe mgbochi mgbochi
Nanị nwere atụmatụ pụrụ iche, na-ahọrọ ihe EVA na-agbanwe agbanwe nwere ezigbo nguzogide, yana nrụgide nke ahụ mmadụ na-abawanye esemokwu iji mee ka nguzozi ka mma, ọkachasị ejiri ya saa ahụ.
Mpempe akwụkwọ a na -eji ihe dị elu nke nwere ike ijide n'aka na akpụkpọ ụkwụ enweghị isi na ịdị ogologo. Ndị slippers a dị mma, dị nro, dị fechaa, na -adịgide, dị mfe nhicha na ngwa ngwa ihicha.
Naanị ihe pụrụ iche, ịhọpụta ihe dị elu Elastic EVA, nwere nguzogide dị mma, yana nrụgide nke ahụ mmadụ na-abawanye esemokwu iji mee ka nguzozi ka mma, ọkachasị na-asa ahụ. ị nọ na nchekwa ma dịkwa mma na -eje ije n'elu ala na -amị amị.
Mpempe akwụkwọ dabara maka oge niile dị ka ime ụlọ ịsa ahụ, ime ụlọ ime ụlọ, ime mkpuchi, kichin, ime ụlọ, ogige, ọdọ mmiri, mgbatị ahụ, na ọbụna gburugburu ụlọ, osimiri wdg.
Nwee ọmarịcha akpụkpọ ụkwụ a, ụkwụ ịhịa aka n'ahụ na mgbatị ahụ mgbe ị gbasịrị mbọ ike. , ụlọ, ịsa ahụ, igwu mmiri, ebe obibi, ogige, ụlọ mkpuchi, ịhịa aka n'ahụ, spa, n'ime, n'èzí, ebe ntụrụndụ, ma ọ bụ ebe ọ bụla naanị iji zuru ike ebe ọ bụla. Na -echebe ụkwụ gị megide nje, ebu, ero na nje na ala. Zuru oke maka iyi ụbọchị niile.
EVA-enyi na gburugburu ebe obibi bụ ihe dị fechaa yana ihe na-agbanwe agbanwe nke yiri roba, mana nwere ezigbo ike na ogologo ndụ, ma jigide ụdị ha. Ọ dị nro, na-agbanwe, na-eguzogide nchekasị, na-egbochi mmiri
A makwala na slippers ndị ọzọ ama ama nwere isi kemịkal. A na-eji akwa Eva kacha mma mee slippers ndị a ma ha enweghị isi na-esi ísì ụtọ. Ọ bụrụ na ị na -achọ akwa akpụkpọ ụkwụ dị ọnụ ala, nke dị mma, achọtala ha!
Anyị na -eji ihe pụrụ iche adịchaghị eme ka ọ bụrụ akpụkpọ ụkwụ mgbake maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị. Nke a na -enye ha 200% nguzogide abrasion ka mma, arụmọrụ 10% ka mma, nkwụsi ike 10% dị elu, na ibiaghachi ọzọ ma e jiri ya tụnyere asọmpi ahụ.
N'adịghị ka akpụkpọ ụkwụ ndị ọzọ na-eme ka mgbu fasciitis nke ahịhịa na-akawanye njọ, slippers anyị na-ejikọ nkwado arch dị nro, ihe na-emenye ụjọ, na ikiri ụkwụ na-adịghị mma iji mepụta akwa ụkwụ nwere contoured nke na-enye ahụ efe mgbu. Na -aga ije na -enweghị ahụ erughị ala na akpụkpọ ụkwụ lancholy mbụ nke ndị dọkịta na -awa ahụ, chiropractors na podiatrists n'ụwa niile kwadoro.
Nyere aka belata fasciitis osisi, nkwalite ikiri ụkwụ, ụkwụ dị larịị, ogbu na nkwonkwo, neuritis, achilles tendinitis, bunions, metarsalgia, esamoiditis, splints shin, hallux rigidus na ihe ndị ọzọ. , igwu mmiri, egwuregwu bọọlụ, mkpọtụ, ezumike, oge ntụrụndụ na ọrụ.
Nke gara aga: nwoke na-adịgide adịgide slipper QL-835 oge gboo
Osote: nwoke ịhịa aka n'ahụ slipper QL-1397 dị mma
Kemeghi Mmadụ na -amị amị
Bath Man akpụkpọ ụkwụ
Akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwoke
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ Boy′S
Akpụkpọ ụkwụ mmadụ nkịtị
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ ndị na -emepụta ihe
Flat Summer Men′S akpụkpọ ụkwụ slippers
Ime ụlọ maka ụmụ nwoke
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwoke
Nwoke na -amị amị
Ndị nwoke Eva slippers
Akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwoke na onye na -amị amị
Akpụkpọ ụkwụ Men Slide
Ndị na -amị amị amị
Ndị nwoke Slipper
Ụmụ nwoke slippers
Akpụkpọ ụkwụ Men′S Beach
Ndị uwe ojii Men′S Beach
Ndị uwe ojii Men′S Eva
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ Men′S
Men′S ịkwanyere Slipper
Akpụkpọ ụkwụ Men′S
Ndị uwe ojii Men′S
Akpụkpọ ụkwụ Men′S Sport
Akpụkpọ ụkwụ Summer Men′S
Akpụkpọ ụkwụ nwoke n'èzí
Akpụkpọ ụkwụ Maka Ụmụ nwoke
Akpụkpọ ụkwụ Maka Men′S
Ndị nwoke na -amị amị slide
Slipper Maka ụmụ nwoke
Slippers maka ụmụ nwoke
Slippers maka ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke
Ndị nwoke slippers egwuregwu
Akpụkpọ ụkwụ Man Summer
Akpụkpọ ụkwụ Men′S Summer
nwoke na-eku ume na-amị amị QL-1827 ime ụlọ
nwoke na-agbachi ụdị ejiji QL-1610
nwoke na-egbochi QL-1912M nke na-abụghị skid
nwoke na-amị amị amị QL-1648 na-akụ ọkpọ
Ntuziaka nhicha nke onye na -amị amị 1
Obodo Jinjiang Neikeng meriri aha ...
Emechiri ememme ngosi Canton nke 129 nke ọma
Neikeng slippers na -amalite mkpọsa nkewa
JinJiang akpụkpọ ụkwụ & ụlọ ọrụ egwuregwu ...